Akhri :- Faashilka Ku Gadaaman Ballanqaadkii Uu Ololaha Ku Soo Galay Madaxweyne Muuse Sannad Ka Dib | Berberatoday.com
Akhri :- Faashilka Ku Gadaaman Ballanqaadkii Uu Ololaha Ku Soo Galay Madaxweyne Muuse Sannad Ka Dib
Hargeysa(Berberatoday.com)-Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in haddii uu sidan ku sii socdo Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo sida uu hadalka u dhigay uu la iman waayo awood uu wax kaga qabto xaaladaha dalka ee Murugsan in ay ka xisbi ahaan abaabuli doonaan wax uu Guddoomiye Faysal ugu yeedhay in la iclaamiyo Doorasho wakhtigeedii ka soo hor martay oo aanu Madaxweynuhu awood u lahayn uu kursiga ku sii fadhiyo oo uu ku doodo in shan sano la doortay. Waxa uu Guddoomiye Faysal sheegay in ay dalka u bannaan tahay doorasho degdeg ah (Re-call Elections).
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo hadal ka jeediyey Munaasibad lagu qabtay Magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay in uu si weyn u saluugsan yahay xaaladda waddanku wakhtigan ku jiro isaga oo ka dayriyey qaabka uu wax u wado Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu isaga oo arrintaa iyo kuwo kale ka hadlaya yidhi:
“Muuse Biixi iyo qayrkiiba ninkii wax innaga xumeeya sidaasi ayaynu isaga qaadaynaa. Codkeena ayaan ku baddalaynaa. Hadduu intaa uu joogo wax hagaajin waayo waddooyin badan oo wax lagaga qabto ayaa jira. Waa lagu fadhiisinayaa. Ma jirto shan sano ayaa la I doortoo waan fadhiyayaa iyo waxaasi ma jirto. Haddii uu shaqayn waayo intaasi oo waddo ayaa jirta oo wax lagaga qaban doono. Waxa jira wax la yidhaa (Re-call Election) doorasho degdeg ah ayaa la qaban karayaa haddii aanu aragno in aanu waxba qabanayn oo aanu tayadii lahayn. Haddii aanu aragno in aanu awood lahayn (Capacity) waanu qaban karnaa (We Will Do It).